Ma nke ahụ abụghị ihe niile. Dika anyi na emepe ihe omuma anyi n’ile anya iwulite linkbait. Anyị na-achọpụta na ọ kachasị mma iji nweta ihe omuma ihe mgbe ha kwụsịrị usoro ma ọ bụ isiokwu dị mgbagwoju anya. Ime nke a na eserese na-adịkarị mfe karịa ide ya na ogologo post ma ọ bụ na akwụkwọ ọcha. Ndị na-ebi akwụkwọ na-ekerịta ha ngwa ngwa n'ihi ha achọghị ịkọwa isiokwu, ma! Na nkenke, ha bara uru ọdịnaya dị mfe ịkọrọ ndị na-ege gị ntị. Nke ahụ bụ ihe ahịa ọdịnaya gbasara!
Ma mgbe inweta njikọ dị oke mma, anyị anaghị achọ ya mgbe niile mgbe anyị na-ekesa ha. Anyị na-agbakwunye oku ime ihe na ụfọdụ akara aha iji mee ka okporo ụzọ ahụ laghachi na weebụsaịtị nke ndị ahịa. Ma ọ na-arụ ọrụ!